Ugu yaraan 39 muhaajir Afrikaan ah ayaa ku dhintay xeebta Sfax ee Tunisia kadib markii… – Hagaag.com
Ugu yaraan 39 muhaajir Afrikaan ah ayaa ku dhintay xeebta Sfax ee Tunisia kadib markii…
Posted on 10 Maarso 2021 by Admin in World // 0 Comments
Wasaaradda Difaaca ee Tunisia ayaa sheegtay in ugu yaraan 39 muhaajiriin Afrikaan ah ay dhinteen maanta ka dib markii labo doonyood ay ku degtay xeebta Sfax, markii ay isku dayeen inay u shiraacdaan dhanka xeebaha Talyaaniga.
Afhayeenka Wasaaradda Difaaca ee Tunisia, Gaashaanle Maxamed Zakri, wuxuu sheegay in 165 qof oo kale, oo badankood Afrikaan ah la soo badbaadiyey inta hawlgalku socdo, oo cutubyada badda iyo kooxaha quusa ay sii wadaan baadhitaanka goobta oo ku taal xeebta Sfax (270 kiiloomitir). koonfurta caasimada Tunisia).
Afhayeenka ilaalada qaranka Tunisia, Houssam El Din El Gabbeli, ayaa sharaxaad ka bixiyay in labada doonyood ay ka amba baxeen xeebta fiidnimadii Isniinta ama horaantii maanta, waxayna wateen muhaajiriin badankood ka yimaadeen wadamada ka hooseeya saxaraha Afrika, waxayna isku dayayeen inay si sharci daro ah ku gaaraan Yurub.
Xeebaha Sfax waxay u noqdeen bar bilow ah oo loogu shiraacdo Talyaaniga iyadoo la adeegsanayo doomo ay ka buuxaan tahriibayaal ka cararaya colaadaha iyo saboolnimada ka jirta Afrika iyo Bariga Dhexe, iyagoo nolol fiican ka raadinaya Yurub.
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ayaa sheegtay in intii u dhaxeysay 1-dii Janaayo ilaa 21-kii Febraayo ee la soo dhaafay, 3,800 oo muhaajiriin ah ay gaareen Talyaaniga dhanka badda, oo ay ku jiraan 1,000 ka yimid dhanka Tunisia, iyo 2,500 oo soo maray Libya.
Sida laga soo xigtay xogta UNHCR, dadka yimid Talyaaniga intii lagu jiray 2020, dadka reer Tunisia ayaa ugu badnaa, tiradooduna waxay gaadhay 12,000.
Madasha Tuniisiya ee Xuquuqda Dhaqaalaha iyo Bulshada ayaa sheegtay in tirada muhaajiriinta Tuniisiyaanka ah ee doomaha ku tagay xeebta Talyaaniga intii lagu jiray sannadka 2020 ay kordheen shan jeer marka loo barbardhigo 2019, kuna dhowaadeen 13,000, tiradii ugu badneyd tan iyo 2011, taasoo markaasi ka dhalatay kororka dhibaatooyinka dhaqaalaha iyo tan bulshada ee Tunisia.